काउलीलाई कम नसम्झनुहोस्, यसरी खाँदा स्वास्थ्य सुधार्छ - ज्ञानविज्ञान
काउली खानु क्यान्सरबाट बच्ने एउटा उत्तम उपाय हो । काउली खानाले क्यान्सरका कोषहरू बनेका छन् भने पनि त्यसलाई बृद्धि हुन नदिई त्यहीँ निष्क्रिय पार्छ ।
यसमा पाइने ‘ग्लुकोसिनोलेट’ र ‘सल्फोराफेन’ले क्यान्सर लाग्न सक्ने तन्तुहरूलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यसमा पाइने अन्य तत्वले डीएनएको मर्मत गरी क्यान्सर रोग लगाउने कोषहरू बढ्नबाट रोक्छ ।
अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, काउलीलाई धेरै पकाएमा यसमा पाइने क्यान्सर विरुद्ध लड्ने तत्वहरू नाश हुने सम्भावना रहन्छ । विज्ञहरू यसलाई काँचै खान सल्लाह दिन्छन् ।
विज्ञहरुको सुझाव छ, ‘काउलीलाई एउटा नुनपानी भएको भाँडामा करिब चार घन्टा जति डुबाउने र चिसो पानीले मज्जाले पखालेर खाने ।’ यसलाई लेदो बनाएर पनि अन्य विभिन्न परिकारको मिश्रण गरेर खान सकिन्छ । साथै सलादका रूपमा यसको प्रयोग धेरै नै उत्तम हुन्छ ।
काउलीमा हुने पौष्टिक तत्व
१२८ ग्राम काउली खाएमा शरिरले निम्न अनुसारका पौष्टिक तत्वहरु पाउँने गर्छ ।
क्यालोरी : २५ ग्राम
फाइबर : ३ ग्राम
भिटामीन सी : दैनिक आवश्यक मात्राको ७७ प्रतिशत
भिटामीन के : दैनिक आवश्यक मात्राको २० प्रतिशत
भिटामीन बि ६ : दैनिक आवश्यक मात्राको ११ प्रतिशत
फ्लोएट : दैनिक आवश्यक मात्राको १४ प्रतिशत
पान्टोथेनिक एसिड : दैनिक आवश्यक मात्राको ७ प्रतिशत
पोटासियम : दैनिक आवश्यक मात्राको ९ प्रतिशत
म्यान्गानिज : दैनिक आवश्यक मात्राको ८ प्रतिशत
म्याग्नेसियम : दैनिक आवश्यक मात्राको ४ प्रतिशत
फोस्फरस : दैनिक आवश्यक मात्राको ४ प्रतिशत
निकै धेरै मात्रामा फाइबर पाइने र कम क्यालोरी हुने भएकाले तौल घटाउँनका लागि काउली उपयुक्त खानेकुरा मानिन्छ । यसमा भएको फाइबरले पेटमा सकारात्मक ब्याक्टेरियाहरु बढाउँछ र पेटको जलन पनि कम गराउँछ, जसले पाचन प्रणाली सुधार्छ ।
काउली भिटामिन ‘के’ र ‘सी’को मुख्य स्रोत हो । एक बटुका काउली मात्र खपत गर्दा शरीरलाई चाहिने ९१ प्रतिशत भिटामिन ‘के’ र ५० प्रतिशत भिटामिन ‘सी’ उपलब्ध हुन्छ ।
Topics #काउली #काउली खादाका फाइदा #राेगहरूबाट मुक्त गराउने काउली
Don't Miss it दाँत दुख्ने, किरा लाग्ने जस्ता समस्या बाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय ! जानीराखौ
Up Next तामाको भाडाको पानी कसरी पिउँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ ?
यस्तो कुरामा ध्यान दिऔँ सुत्केरी महिलाले
सुत्केरी आमाले स्तनपान गराउन कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । यो बच्चाका लागि अमृतसमान हुन्छ । आमाको दूधमा बच्चालाई चाहिने भिटामिन, खनिज…
यस्ता छन्, दाम्पतीले जान्नै पर्ने केहि कुरा
– शंका र अविश्वासले दम्पतीबीच फाटो ल्याउँछ । त्यसैले पहिले त शंका, उपशंका, अविश्वासको वातावरण बन्न नै नदिनुहोस् । यदि…
औषधोपचारमा जिरा को प्रयोग
जीरा विभिन्न किसिमको भएता पनि यहाँ सबै तरकारी तथा साग सब्जीमा प्रयोग हुने जीराको औषधीय उपयोगको बारेमा उल्लेख गरिदैछ ।…
चाडबाडमा खानपान र दाँतको सरसफाइ
चाडबाडका बेला खानेकुरा निर्धक्क खाँदा कहिलेकाहीँ बिरामी पर्ने गरिन्छ। यस्तै, खानेकुरा चपाउने दाँतमा समस्या पनि आउने गर्छ। चाडपर्व भन्ने बित्तिकै पहिलो…